09-06-2016, 05:50 PM ရန်ကုန်မှ မာစွတ် ၊ မာဆတ် ၊ ဖာဘိများ .... (၂၀၀၃ ကပါ အသစ်တွေရှိရင် အလင်းပြခဲ့ Bro...) ပလာဇာ နောက်က အောင်သပြေလမ်း တိုက်၃၈ အပေါ်ဆုံးထပ် (ဘယ်)
၆၀၀၀ ကျပ် တလျှော့
အပြင်ခေါ်ရင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်
တောင်ပေါ်သားနဲ့နီးတော့ တောင်ပေါ်သားသာ ခေါ်ပီးအားရပါး၇ဆွဲပေါ့ဗျာ..........။
စမ်းချောင်း မင်္ဂလာလမ်း ပေါ် ( ဦးစံငြိမ်းလမ်း ဦးတိုက်နေသည့် နှစ်ထပ်အိမ် ) Moon Light သန့်ပါသည် ။ တံခါးပေါ်မှာ Moon Light /ဆံပင်ညှပ် ခေါင်းလျှော် ဟု ရေးထားပါသည်။ ဖွင့်ထားတာ လေးလ လောက်ရှိပြီလို့တော့ သိရပါသည်။ ဖိုးဖိုးကြီးတော့ ခုမှ သိပါသည်။
မာစွတ် .. ဈေး .. ပုံမှန် ..
မာဆက် သွားရင် တန်းပြီး အခန်းထဲမ၀င်နဲ့ ယောင်ပေပေနဲ့ အိမ်သာဘက်သွားလိုက် နောက်ခန်းထဲမှာစော်လေးတွေရှိတယ်
နာမည်မေးထားပြီး byname နဲ့ခေါ်လိုက် ဒါဆိုအကြိုက်ရတယ်။
စောစောထဲက ဘွိုင်ကိုပြောထား လန်းတဲ့ဆော်ထည့်ပေး မထည့်ပေးရင် တန်းပြန်မယ်လို့ ပြောထား
ဘွိုင်တွေကလဲ 2ခါပြန်ခေါ်ရအောင် မလန်းတဲ့ဆော်တွေထည့်ပေးတာများတယ်
လန်းတဲ့ဆော်တွေရှိတဲ့နေရာက လသာထဲက စဥ့်အိုးတန်းလမ်း အောက်ဘလောက် အမှတ် 45 လိုင်းယွန်းဇုန်
အခန်းကြေး2နာရီ6ထောင် စော်ကြေးက 1 သောင်းခေါ်တယ် 5ထောင်နဲ့လဲ ရတတ်တယ် အလကားလဲရတတ်တယ်
တအားညောင်းလို့ အနှိပ်သီးသန့်ခံချင်ရင်တော့ လသာလမ်း အပေါ်ဘလောက်က ဟောင်ကောင်ဘားလို့ နာမည်တွင်တဲ့
ပေ့မေကာ မာဆက် အနှိပ်ကတော့ တကယ်ကောင်းတယ် စွပ်လို့တော့မရဘူး
နောက်တခုက အောင်ဆန်းကွင်း တိုက်တန်းက အနောက်ဘက်ခြမ်း အပေါ်ထပ်မှာ 21 မာဆက် ဖူဂျီလို့လဲ ခေါ်တယ်
အဲဒါလဲ အနှိပ်သီးသန့်ပဲ ပေ့မေကာလောက်တော့ အနှိပ်မကောင်းဘူး ဒါပေမယ့် စော်လေးတွေက ငယ်ငယ်လေးတွေများတယ်
ရေများများလောင်းပြီး တွယ်လို့ရတယ် ကြိုးစားမှရမှာနော် လန်းတာတော့ တော်တော်လန်းတယ်
နောက် တာမွေဗလီနားက ရွေဗဟိုဆေးရုံတိုက်တန်းမှာလဲ ရှိတယ် orange ရဲ့ အပေါ်လောက်ကျမယ်
အဲဒါကလဲ မာဆက်သီးသန့်ပဲ နှိပ်တာကတော့ သာမာန်ပါပဲ
ဘုရင့်နောင်နားမှာဆိုရင်လည်း THE SEA ဆိုတာရှိတယ်..Kနဲ.တွဲဖွင့်ထားတာ...ဒါပေမဲ့မကောင်းဘူးမသွားနဲ.စော်တွေကအာပေတူးတွေ..ဒါပေမဲ့ဈေးကမတရားအော်တယ်..
နောက်တစ်ခုကဘုရင့်နောင်ကားဝင်းထဲမှာ...ရိုးကြီးပတ်လမ်းတိုတာရှိတယ်...အဲကMODERN တည်းခိုခန်း ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေ.ရင်အပေါ်ထပ်တက်သွားလိုက်...ဘာနဲ.မှမမှားဘူး..အဲတစ်ခုပဲရှိတယ်..အခန်းက
လည်းသီးသန်.ခန်းစော်ခနဲ.အခန်းကနဲ.မှ တစ်စက်ရှင် ၆၀၀၀ပဲပေးရတယ်...တန်ပေမဲ့အင်မဟုတ်ဘူး...
ကျန်တာလေးတွေလည်းဆက်ပြောကြပါနော်...မာဆတ်တွေဘိတွေ...အထူးသဖြင့်ဘိတွေနဲနေတယ်.. credit သစ်ထူးလိမ်
Thanks given by: luv , unnamed988 , Oggy , komin779 , dude , phyo lay , မောင်နေနိုင်သူ
Vlack Junior Member
10-12-2016, 12:03 AM FYI ...... လသာလမ်း လူကြီးမင်းဘက်ခြမ်း Vivo ဘေးနားလှေကားပဲ မာစွတ် တခု ရှိတယ် ။ ကိုယ်တွေမူးပြီးရောက်သွားတာဆိုတော့ သေချာတော့ မှတ်မိတော့ဘူး ဆော်တွေကို ... ၂၃ ၁၅ လန်းတယ် ပြောတယ် ဝိတ်တာက .. ဘုံပြောက်နေရင် စမ်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့.. ပြီးရင် Peace Maker မှာ သွားနှပ်ယုံပဲ နီးတယ် ? 1sec 4000 girl about 10k Find
10-25-2016, 03:29 AM မန်လေးသိကြလာ
Thanks given by: Danvone
ChristieLux Junior Member
12-08-2016, 04:27 PM Hotel Shwe Gon Dine က Luv Tunnel အကြောင်းသိသူတွေရှိကြလား ... အလင်းပြကြပါ .... http://www.hotelshwegonedaing.com/our-services/
Bruce Kwee Junior Member
12-09-2016, 03:16 AM (10-12-2016, 12:03 AM)Vlack Wrote: FYI ...... လသာလမ်း လူကြီးမင်းဘက်ခြမ်း Vivo ဘေးနားလှေကားပဲ မာစွတ် တခု ရှိတယ် ။ ကိုယ်တွေမူးပြီးရောက်သွားတာဆိုတော့ သေချာတော့ မှတ်မိတော့ဘူး ဆော်တွေကို ... ၂၃ ၁၅ လန်းတယ် ပြောတယ် ဝိတ်တာက .. ဘုံပြောက်နေရင် စမ်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့.. ပြီးရင် Peace Maker မှာ သွားနှပ်ယုံပဲ နီးတယ် ? 1sec 4000 girl about 10k Peace Maker ကဘာလဲ ဘရို ၊ မသိလို့ ပြောပြပါလား ။ Vivo ဘေးကမာစွတ်သက်သက်လား နိုက်ခေါ်လို့ရတဲ့စော်လေးတွေလား
Current time: 01-18-2017, 09:41 AM